Suxufi ka tirsan Warbaahinta Qaranka oo noqday Wariyaha sanadka – Radio Muqdisho
Codeynta ayaa soo ifbaxay dhammaadka maalintii ugu dambeysay ee sannadkii la soo dhaafay ee 2014-ka, waxaana soo qaban qaabiyey Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada London ee dalka UK oo kaashanaya qaar ka mid ah Shirkadaha iyo Warbaahinta ka howlgasha caasimadda dalka Ingirsiiska.
Codeynta oo u jeedkeedu ahaa in lagu dhiirageliyo dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa si weyn u muujiyey dadaalka ku aaddan howlahooda shaqo, waxa ayna coddeyntu aheyd saddex qeybood, muuqaal, maqal iyo Ra’yi uruurin, waxaana sidoo kale qeyb ka ahaa suxufiyiin kale oo iyagana ka howlgalla Telefishinnada Soomaalida.
Qaar ka mid ah Soomaalida ku nool caasimadda dalka Ingiriiska oo wax laga weydiiyey cidda ay u dooran lahaayeen in uu yahay Wariyihii ugu wanaagsanaa dhanka Akhrinta wararka iyo soo gudbinta macluumaadka horumarineed ee ka hadlaya Soomaaliya, kuwaas oo in ka badan 95% codkooda ku taageeray Feysal Muuse Maxamed oo ka howlgallada Warbaahinta Qaranka Somalia ee Sntv iyo Radio Muqdisho, isla markaana Feysal Muuse u soo jeediyey in uu xoojiyo horumarka uu sameeyey.
Dhiiragelinta Jaaliyadda kaddib, ayeey madaxda wasaaradda oo uu hormuud ka yahay sii hayaha wasiirka Warfaafinta, agaasimeyaasha sida Agaasimaha Warbaahinta waxa uu boggaadiyey oo uu ugu hambalyeeyey Feysal Muuse Maxamed howl-karnimadii uu muujiyey sannadkii la soo dhaafay, waxa ayna ku dhiiragelinyeen in uu si laba laabbo dadaalkiisa shaqo ee dhanka u adeeggidda Qaranka Soomaaliyeed dalka iyo dibed, maadaama uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee fursaddaasi heshay.
Wariye Feysal Muuse Maxamed oo loo doortay in uu yahay Suxifiga sanadka ee Telefishinnada Soomaalida, ayaa isaga oo ka hadlayey arrintan si weyn ugu mahadceliyey dhammaan Shacabka Soomaaliyeed ee degan dalka Ingiriiska gaar ahaan Jaaliyadda London oo uu ku tilmaamay in ay tahay Jaaliyad Soomaaliyeed oo u taagan in ay dhiirageliso Dhallinyarada Soomaaliyeed, waxa uu na farriin u jeediyey Suxafiyiinta Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed.fariin taas oo ahayd der-der gelinta Howlaha ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadkooda dhibaatda hayso
Codeynta Wariyaha ugu wanaagsan Akhrinta Wararka Telafishinnada Soomaalida ee uu ku guuleystay Feysal Muuse Maxamed, ayaa ka mid ah guulaha taarikhaga ah ee u soo hoyatay Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, iyadoo wasaaradda Warfaafintuna ay ballanqaaday in ay xoojin doonto dhiiragelinta Wariyeyaasha Warbaahinta Qaranka iyo kuwa gaarka loo leeyahay haddii ay muujiyaan Howlkarinimo.
Soo gudbinta warar mug iyo miisaan leh ayuu ku caan baxay wariye faysal Muuse Maxamed isagoo ah akhriye warar Qoraa Wabka Radio Muqdisho.net ahna War,Akhriyaha Tvga Qaranka ayaa ah wariye u qalma qiimaynta bulshada Soomaaliyeed ee reer London u sameeyeen
Dhamaan shaqaalaha warbaahinta Qaranka ayaana u kala harin in ay farxadda la qayb sadaan walaakood faysal Muuse Maxamad oo noqday wariyaha sanadka
Wasaaaradda Caafimaadka oo caddeysay in Soomaaliya aan laga helin kiiska Cudurka Ebola